အလုပ်လုပ်ဖို့ ရှင်သန်နေတာလား ? ရှင်သန်ဖို့ အလုပ်လုပ်နေတာလား ? – Gentleman Magazine
သင့်က ဈေးကွက်သစ်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တာလား။ သင့်ကို တွန်းအားပေးတဲ့အရာက ဘာလဲ။ သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုလား၊ အကျိုးအမြတ်လား ?
လုပ်ချင်တာကိုလုပ်ပြီး အကျိုးအမြတ်လည်းရမယ်ဆိုရင်ရော ?
၀ါသနာပါရာကို အခြေခံပြီးလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းက ဒီနှစ်ခုစလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်နေချင်တဲ့ ဘ၀မျိုးမှာ လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်နေရပြီး ၀င်ငွေလည်း ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ချင်တာကိုလုပ်ရင် အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်ဖို့ နေချင်တဲ့ဘ၀ကို ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပထမဆုံး သင်လိုချင်တဲ့ဘ၀ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပြီး ဒီဘ၀မှာ ၀င်ငွေရနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကို အဖြေရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ နေချင်တဲ့ဘ၀မှာ ရှင်သန်ဖို့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ဖို့ ရှင်သန်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ရှင်သန်ချင်တဲ့ ဘ၀မှာ နေထိုင်လှုပ်ရှားရင်း ၀င်ငွေရရှိစေနိုင်ဖို့အတွက် အဆင့်(၇)ခု ရှိပါတယ်။
၁။ သင့်ဘ၀နဲ့ စတင်ပါ။
လုပ်ငန်းရှင်အများစုက သူတို့ရှင်သန်နေထိုင်ချင်တဲ့ ဘ၀မျိုးကို ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လုပ်စရာ ကိစ္စတွေ များလာတာနဲ့အမျှ အလုပ်ပေါ်မှာပဲ အလွန်အကျူးအာရုံစိုက်တတ်ကြပြီး နေချင်တဲ့ဘ၀ကို ဘေးဖယ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သင်နေချင်တဲ့ ဘ၀ပုံစံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှသာ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ထပ်တူကျတဲ့ အလုပ်မျိုးကို ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ အလုပ်နဲ့ ဘ၀က တစ်သားတည်းဖြစ်ပြီး သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ငွေကြေးရနိုင်ချေကို ကြည့်ပါ။
ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုကို မထုတ်လုပ်ခင်မှာ သင်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ရှာဖွေပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအပ်ချက်အတွက် သင့်ရဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးမှုကို အခကြေးငွေရရှိနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ သင်လုပ်ချင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုပ်ပါနဲ့။ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် ရနိုင်ချေကိုပါ ကြည့်ပါ။
၃။ မဟာဗျူဟာမြောက်မေးခွန်းတွေ မေးပါ။
နေချင်တဲ့ဘ၀နဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံးအခြေခံအဆင့်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ခြေလှမ်းတွေ မလှမ်းခင်မှာ အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ။
သင်ဖြည့်ဆည်းမယ့် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်မှာ ဘယ်သူတွေက ၀ယ်ယူမှာလဲ?
ဘယ်လိုထုတ်ကုန်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမျိုးကို သူတို့ဝယ်မှာလဲ ?
၀ယ်သူတွေက သင့်ကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်လာစေချင်တာလဲ ?
၄။ အခြေပြုနေရာ သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ပါ။
သင့်မှာ အခြေပြုနေရာတစ်ခုခု မရှိဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်သလို ဖောက်သည်တွေနဲ့လည်း ဆက်သွယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုနည်းပညာခေတ်မှာ သင့်ရဲ့အခြေစိုက်နေရာက အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်သစ်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်အများစုက ဒီအဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲတွေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ Facebook Page နဲ့ တင် လုံလောက်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တော့ စတင်ပါ။
၅။ ရှေ့ထွက်ပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။
သင့်ရဲ့ Facebook Page လွှင့်တင်ပြီး လုပ်ငန်းစတင်ပြီဆိုတာနဲ့ ဖောက်သည်တွေရရှိဖို့အတွက် ရှေ့ထွက်လုပ်ဆောင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးအချက်နှစ်ခု ရှိပါတယ်။
– အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ မေးခွန်းသုံးခုကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆက်မေးပါ။ သင့်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် လိုအပ်ချက်ကို ၀ယ်သူသုံးစွဲမယ့်သူတွေ ရှိတဲ့ Facebook Group စတဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ အရင်ဆုံးလှုပ်ရှားပါ။
– အားလုံးကို တစ်ယောက်တည်းလုပ်ဆောင်တာထက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရှာဖွေပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ စဉ်းစားပါ။ လူသိများတဲ့ Group တွေမှာ post တွေ ရေးသားပါ။
၆။ ၀န်ဆောင်မှုသည်သာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်အများစု မှားတတ်ကြတဲ့ အမှားကတော့ မေးခွန်းတွေ မေးနေတတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ၀ယ်သူဖက်က အပြီးအစီးရှင်းလင်းအောင်သိရမှသာ ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရောင်းအားနည်းတာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဖက်ကပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ပြောပါ။ ပြီးမှ မေးပါ။
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်တည်ထောင်ရတာက ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေ အများကြီးရှိမှာပါ။ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး အလုပ်ကြိုးစားမှုကသာ အောင်မြင်မှုရဲ့ သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပျလုပျဖို့ ရှငျသနျနတောလား ? ရှငျသနျဖို့ အလုပျလုပျနတောလား ?
သငျ့က စြေးကှကျသဈထှငျလုပျငနျးရှငျတဈယောကျလား၊ ဒါမှမဟုတျ လုပျငနျးရှငျဖွဈခငျြတာလား။ သငျ့ကို တှနျးအားပေးတဲ့အရာက ဘာလဲ။ သငျ့ရဲ့စိတျအားထကျသနျမှုလား၊ အကြိုးအမွတျလား ?
လုပျခငျြတာကိုလုပျပွီး အကြိုးအမွတျလညျးရမယျဆိုရငျရော ?
၀ါသနာပါရာကို အခွခေံပွီးလုပျတဲ့ လုပျငနျးက ဒီနှဈခုစလုံးကို ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျပါတယျ။ သငျနခေငျြတဲ့ ဘဝမြိုးမှာ လုပျခငျြတာတှကေို လုပျနရေပွီး ၀ငျငှလေညျး ရရှိနမှောဖွဈပါတယျ။
ဒီလို လုပျခငျြတာကိုလုပျရငျ အကြိုးအမွတျရရှိနိုငျဖို့ နခေငျြတဲ့ဘဝကို ရှေးခယျြမှုမှနျကနျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ပထမဆုံး သငျလိုခငျြတဲ့ဘဝကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသတျမှတျထားရမှာဖွဈပွီး ဒီဘဝမှာ ၀ငျငှရေနိုငျတဲ့ လုပျငနျးဘယျလိုလုပျလို့ရနိုငျမလဲဆိုတာကို အဖွရှောရမှာဖွဈပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ နခေငျြတဲ့ဘဝမှာ ရှငျသနျဖို့အလုပျလုပျတာဖွဈပါတယျ။ အလုပျလုပျဖို့ ရှငျသနျနတောမဟုတျပါဘူး။ ဒီလို ရှငျသနျခငျြတဲ့ ဘဝမှာ နထေိုငျလှုပျရှားရငျး ၀ငျငှရေရှိစနေိုငျဖို့အတှကျ အဆငျ့(၇)ခု ရှိပါတယျ။
၁။ သငျ့ဘဝနဲ့ စတငျပါ။
လုပျငနျးရှငျအမြားစုက သူတို့ရှငျသနျနထေိုငျခငျြတဲ့ ဘဝမြိုးကို ပွောလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့လုပျစရာ ကိစ်စတှေ မြားလာတာနဲ့အမြှ အလုပျပျေါမှာပဲ အလှနျအကြူးအာရုံစိုကျတတျကွပွီး နခေငျြတဲ့ဘဝကို ဘေးဖယျထားတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ သငျနခေငျြတဲ့ ဘဝပုံစံကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး သတျမှတျထားရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုသတျမှတျဆုံးဖွတျထားပွီးမှသာ ဆန်ဒနဲ့ ဘဝထပျတူကတြဲ့ အလုပျမြိုးကို ထညျ့သှငျးလုပျဆောငျဖို့ စဉျးစားရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါမှသာ အလုပျနဲ့ ဘဝက တဈသားတညျးဖွဈပွီး သငျ့တျောမှနျကနျတဲ့ ဦးစားပေးရှေးခယျြမှုတှကေို လုပျဆောငျနိုငျမှာဖွဈပွီး အောငျမွငျလာမှာဖွဈပါတယျ။
၂။ ငှကွေေးရနိုငျခကြေို ကွညျ့ပါ။
ထုတျကုနျတဈခု ဒါမှမဟုတျ ၀နျဆောငျမှုတဈခုကို မထုတျလုပျခငျမှာ သငျဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ စိတျအားထကျသနျတဲ့ လိုအပျခကျြကို ရှာဖှပေါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုအပျခကျြအတှကျ သငျ့ရဲ့ဖွညျ့ဆညျးပေးမှုကို အခကွေးငှရေရှိနိုငျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ သငျလုပျခငျြတာတဈခုတညျးနဲ့ မလုပျပါနဲ့။ ငှကွေေးအကြိုးအမွတျ ရနိုငျခကြေိုပါ ကွညျ့ပါ။
၃။ မဟာဗြူဟာမွောကျမေးခှနျးတှေ မေးပါ။
နခေငျြတဲ့ဘဝနဲ့ ထပျတူကတြဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးအောငျမွငျဖို့အတှကျ အရေးအကွီးဆုံးအခွခေံအဆငျ့တဈခု ဖွဈပါတယျ။ ရှဆေ့ကျခွလှေမျးတှေ မလှမျးခငျမှာ အောကျပါမေးခှနျးတှကေို သငျ့ကိုယျသငျမေးပါ။
သငျဖွညျ့ဆညျးမယျ့ စြေးကှကျလိုအပျခကျြမှာ ဘယျသူတှကေ ၀ယျယူမှာလဲ?
ဘယျလိုထုတျကုနျနဲ့ ၀နျဆောငျမှုမြိုးကို သူတို့ဝယျမှာလဲ ?
၀ယျသူတှကေ သငျ့ကို ဘယျလိုဆကျသှယျလာစခေငျြတာလဲ ?
၄။ အခွပွေုနရော သတျမှတျလုပျဆောငျပါ။
သငျ့မှာ အခွပွေုနရောတဈခုခု မရှိဘူးဆိုရငျ သငျ့ရဲ့လုပျငနျးကို လုပျဆောငျနိုငျမှာမဟုတျသလို ဖောကျသညျတှနေဲ့လညျး ဆကျသှယျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ အခုနညျးပညာခတျေမှာ သငျ့ရဲ့အခွစေိုကျနရောက အငျတာနကျဝကျဘျဆိုကျတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ စြေးကှကျသဈထှငျလုပျငနျးရှငျအမြားစုက ဒီအဆငျ့နဲ့ပတျသကျပွီး အခကျအခဲတှနေ့တေတျကွပါတယျ။ တကယျတမျးတော့ Facebook Page နဲ့ တငျ လုံလောကျပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့တော့ စတငျပါ။
၅။ ရှထှေ့ကျပွီး လုပျဆောငျပါ။
သငျ့ရဲ့ Facebook Page လှငျ့တငျပွီး လုပျငနျးစတငျပွီဆိုတာနဲ့ ဖောကျသညျတှရေရှိဖို့အတှကျ ရှထှေ့ကျလုပျဆောငျရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအဆငျ့ကိုရောကျတဲ့အခြိနျမှာ သိထားသငျ့တဲ့ အရေးကွီးအခကျြနှဈခု ရှိပါတယျ။
– အထကျမှာဖျောပွခဲ့တဲ့ မေးခှနျးသုံးခုကို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဆကျမေးပါ။ သငျ့ဖွညျ့ဆညျးပေးမယျ့ လိုအပျခကျြကို ၀ယျသူသုံးစှဲမယျ့သူတှေ ရှိတဲ့ Facebook Group စတဲ့ လူမှုကှနျယကျတှပေျေါမှာ အရငျဆုံးလှုပျရှားပါ။
– အားလုံးကို တဈယောကျတညျးလုပျဆောငျတာထကျ လုပျဖျောကိုငျဖကျရှာဖှပွေီး လုပျဆောငျဖို့ စဉျးစားပါ။ လူသိမြားတဲ့ Group တှမှော post တှေ ရေးသားပါ။
၆။ ၀နျဆောငျမှုသညျသာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ဖွဈပါတယျ။
လုပျငနျးရှငျအမြားစု မှားတတျကွတဲ့ အမှားကတော့ မေးခှနျးတှေ မေးနတေတျတာပဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့က ၀ယျသူဖကျက အပွီးအစီးရှငျးလငျးအောငျသိရမှသာ ဖွညျ့ဆညျးပေးတတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ရောငျးအားနညျးတာ အဆနျးတော့မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ဖကျကပေးစှမျးနိုငျတဲ့ ၀နျဆောငျမှုတှကေို ပွောပါ။ ပွီးမှ မေးပါ။
လုပျငနျးတဈခုကို စတငျတညျထောငျရတာက ပငျပနျးဆငျးရဲမှုတှေ အမြားကွီးရှိမှာပါ။ စိတျရှညျသညျးခံပွီး အလုပျကွိုးစားမှုကသာ အောငျမွငျမှုရဲ့ သော့ခကျြဖွဈပါတယျ။
Previous: အမျိုးသမီးတွေကို ညှို့ငင်အားကောင်းစေသည့် အချက်(၉)ခု
Next: အလုပ်ရှင်ရဲ့ အာရုံစိုက်အလေးပေးမှုကို ရရှိဖို့ နည်းလမ်းကောင်း(၇)ခု